Beginner တွေအတွက် 2019 SEO Ranking Tip အချို့ -
SEO အကြောင်းကိုလေ့လာနေတဲ့သူတစ်ယောက်လား? ဒါမှမဟုတ် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် SEO ကိုအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လား? SEO နဲ့မရင်းနှီးသေလို့ ခေါင်းရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် Beginner တွေအတွက် 2019 SEO Ranking Tip တွေက သင့်အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမယ့်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
· Meta Tag ထဲက Title နဲ့ Description တွေကို SEO အတွက်သင့်လျော်မယ့် Keyword တွေကို ရွေးချယ်ပေးပါ
· Mobile View မှာ Responsive ဖြစ်ဖို့ အတွက် အထူး ဂရုစိုက်ပေးပါ
· Content တွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး Quality ကောင်းတဲ့ Image တွေကို သုံးပေးပါ
· Google Search Engine က သင့် Website URL တွေကို တစ်စုထဲရှိကြောင်းသိအောင် Sitemap ထည့်ပေးပါ
· Search Engine က Content အသစ်တွေကို ပိုအသားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သင့်ရဲ့ Website က
· Blog တွေကို အမြဲ Update ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပါ
· Search Engine က Fresh Content တွေကို ပိုပြီးကြိုက်တဲ့ အတွက် SEO နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Content တွေကို Update အမြဲလုပ်ပေးပါ
Posted by Min Thuta/ Thursday June 20th, 2019/ Blog/0Comment